]Onye na-emepụta oriọna na ndị na-enye ọkụ - Giga Lighting
Ọkachamara imepụta ọkụ na onye na-emepụta oriọna kemgbe 1995.
Onye ndu Plafond
Led Pendant na ndị ọzọ
Mgbidi / ntụpọ / Track
Ọkụ arụrụ n'ime ya
Ihe njide oriọna
Ndị na-emepụta oriọna na-ahụ maka mmepụta nke ọkụ ọkụ na oriọna dị mma. Na-elekwasị anya n'ichepụta ọkụ LED, mmepụta na ngwọta.
Ngwakọta anyị dị iche iche na-ekpuchi oriọna ịchọ mma na ọkụ azụmahịa.
Giga ọkụ kpochapụwo ime ime 0465
]Igwe ọkụ LED& LED Pendant 0465 usoroỤdị: oriọna nke oge a, oriọna nke oge a, oriọna eji achọ ụlọIhe: Iron + AcrylicSize: Dia. 400mm / 600mm / 800mmLumen: 80-85LM/W, nke nwere ike imebiAgba: aja ọcha / aja ojii / ọla edo ahịhịa / eserese osisiIsi iyi ọkụ: LED 2835Akwụkwọ: CE / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
]pendantSeries No .: 0512Style: Postmodernism oriọnaIhe: igwe anaghị agba nchara& acryliSize: Dia. 550mm / 800mmImecha: Ihe osiseÌhè isi: Ikanam 3030Akwụkwọ: OA / CB / VDE / TUV / Mankeumman / ETL / SAA
Giga Lighting Classic ime ime ụlọ 20210
]Gigalighting na No. 36, Zhongshan ụzọ abụọ, Shiqi, Zhongshan, Guangdong, China (koodu nzi ozi: 528400) Isi ngwaahịa 20210.Site na ahụmịhe mmepụta ihe bara ụba, na-amụta teknụzụ dị elu nke mba ofesi ma na-ewebata akụrụngwa ọkaibe. E wezụga nke ahụ, anyị nwere usoro njikwa ụda dị mma iji mee nyocha nke ọma. Ihe a niile na-enye ọnọdụ dị mma maka imepụta ihe dị elu.
Giga ọkụ kpochapụwo ime ime ụlọ 20169
]Igwe ọkụ n'uko LED, Pendant LEDIhe: Aluminom + Iron + AcrylicSize: Dia. 420mm / 600mm / 800mmLumen: 4300LM, 5270LM, 8600LMAgba: aja ọcha / aja ojii / ọla edo brushedIsi iyi ọkụ: LED 2835Akwụkwọ: CE / CB / VDE / TUV / UL / ETL / SAA
Giga ọkụ bụ ọkachamara na-emepụta oriọna yana onye mmekọ azụmahịa siri ike maka ihe LED na ọrụ. N'ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ iji wepụta ngwaahịa ọkụ na ahịa ndị Europe, obi abụọ adịghị ya na anyị kwenyere na anyị nwere ndidi, anyị nwere ntụkwasị obi, anyị nwere ọrụ na anyị nwere mmasị. Anyị maara, na inwekwu ndidi na ịkpachara anya karị, anyị ga-enwekwu ohere ịnye ndị ahịa anyị ngwọta ka mma. Yabụ, anyị na-aga n'ihu mgbe niile na "Aiming na mma, ndị mmadụ, ntụkwasị obi na imeri n'ime mmụọ nke ọmụmụ na onye na-azụ ahịa."
1. Anyị Design : E wezụga anyị mma na ODM azụmahịa, anyị na-enye asọmpi OEM ọrụ
2. Ahụmahụ: Ihe karịrị afọ 25 nke ndị na-emepụta ihe ịchọ mma ụlọ ọkachamara, onye mmekọ ntụkwasị obi gị.
3. OEM / ODM: Anyị na-ebuga ọtụtụ narị ngwaahịa anyị na ndị ahịa na mba dị iche iche kwa afọ
Mebere mmekọrịta siri ike na ahịa ahịa
Ndị ọkachamara na-emepụta oriọna China-ndị na-emepụta ọkụ Giga
]Ụkpụrụ dị elu na-agba ọsọ site na imewe na mmepụta.
Giga Lighting bụ ọkachamara na ogologo oge na-emepụta ọkụ na onye na-ebupụ. N'ịkwado ihe karịrị afọ 25 nke mmepụta oriọna maka mbupụ naanị, anyị na-ejere ndị ahịa ozi na Europe, North America na South America ozi.
Malite na ọkụ ọkụ kachasị mfe, Giga Lighting na-aṅa ntị na mkpa nke ndị ahịa Europe na America. Anyị malitere site na nhazi nhazi nke ndị ahịa na-enye ma jiri nwayọọ nwayọọ na-enweta ahụmahụ na mmepụta mmepụta. Site na nghọta anyị banyere nhazi ngwaahịa na ịma mma nke ìhè na onyinyo, anyị ejirila nwayọọ nwayọọ mepụta ngwaahịa anyị.
Taa, Giga Lighting nwere ntọala mmepụta abụọ na Zhongshan City, Guangdong Province, China, nwere ihe karịrị 1000 ngwaahịa. Anyị nwere ngwaahịa dị iche iche. Dabere na ụdị ọgbara ọhụrụ, ngwaahịa ndị a na-ekpuchi ime ụlọ gaa n'èzí, na-achọ mma maka azụmahịa.
Giga Lighting abanyela n'ọhịa nke LED ruo ogologo oge. Ebe ọ bụ na 2013, anyị mepụtara Ikanam ngwaahịa usoro. Oke nke ngwaahịa LED abawanyela ngwa ngwa. Nchikota nke LED na onye ọkwọ ụgbọ ala, njikwa mma nke akụrụngwa eletriki na ngwa tozuru oke nke nkasi obi ọkụ bụ isi asọmpi nke Giga Lighting.
N'ime afọ 25 gara aga, Giga Lighting ewerela "Ka ndị mmadụ nwee mmasị na ịma mma, nkasi obi na ikpo ọkụ sitere na ìhè na onyinyo" dị ka ọhụụ ya, ma na-agba mbọ iji na-aga n'ihu na nhazi na ejiji kachasị ọhụrụ, ma ihe ijuanya na usoro zuru oke na ọnụ ala. ọnụ ahịa.
Na 2021, "Kyocera Philosophy" ejirila obi onye ọ bụla jikọtara ya na ndị ọrụ ibe ya.
Inwe afọ ojuju site n'aka ndị ahịa anyị n'ịdị mma na ọrụ ga-adị anyị mkpa ruo mgbe ebighị ebi!